ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ နှင့် ၄ဝဝ ကြား ရွေးချယ်သင့်သည့် Toyota Celsior - Myanmar Automobile and Equipment Directory
2003 Model Celsior က ရှည်လျားပေမဲ့ ခံ့ထည်တဲ့ပုံစံရှိပြီး အ နောက်မီးတန်းက LED ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမိုဒယ်မှာ ပြောင်းလဲခဲ့တာ တွေက အရှေ့မီးလုံးက HID Headlight ပုံစံဖြစ်လာသလို Original Back-up Camera ပါရှိပြီး ဒူးကာလေအိတ်နဲ့ အနောက်ခန်း မျက်နှာကြက်၊ ကြည့်မှန်တွေ ဖြည့်စွက်ပါဝင်လာပါတယ်။ A+C Interior Selection ၊ C ၊ ER ၊ CF Package ၊ CF Package Interior Selection စတဲ့ အတွင်းပါဝင်တဲ့ Features တွေအပေါ် မူတည်လို့ Grade တွေခွဲထားပြီး ရေခဲသေတ္တာ၊ အနောက်ထိုင်ခုံ Message ? Shauffeur Seat ? Premium Leather စတဲ့ Features တွေကို အမြင့်ဆုံး Grade မှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Keyless Entry စနစ်ကို Trim အားလုံးမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့ အတွင်းခန်းမှာ Driver Seat ကို အနေအထားမျိုးစုံ ရွေ့ပြောင်းနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါသေးတယ်။ ထိုင်ခုံတွေကို 2+1 Seat ပုံစံ ခင်းကျင်းထားပါတယ်။ ဒါ့ပြင် Air Suspension စနစ်နဲ့ တခြား အောက်ပိုင်း ထိန်းချုပ်စနစ်များစွာကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
Toyota Celsior ကို အရင်မိုဒယ်တွေမှာ 4.0 L 118 အင်ဂျင်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ၂ဝဝ၃၊ ၂ဝဝ၅ မိုဒယ်တွေမှာတော့ မြင်းကောင်ရေ ၂၉ဝ အား 4.3L V8 ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့ 6-Speed Autogear တို့ တွဲဖက်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Toyota Celsior 2003-2005 မိုဒယ်တွေမှာ နံပါတ် အနိမ့်/အမြင့်၊ Grade အလိုက်ပါဝင်မှု၊ သုံးပြီးကီလိုနဲ့ တခြားအချက်တွေအပေါ် မူတည်လို့ ကျပ်သိန်းသုံးရာကေန လေးရာဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။